Isicinezeli sediyaphragm, China Abavelisi beDiaphragm abavelisi, abaxhasi, Umzi mveliso - Beijing Sinocleansky Technologies Corp.
Ulapha : Ikhaya>iimveliso>ICompressor yegesi
Kuba gases ubunyulu High
◎Irhasi ecinezelweyo itywinwe ngokupheleleyo ngaphandle, ebonelela ngokutywina okuphezulu; Isiguquli sentsebenzo yokutywina okuphezulu ilungele ngokukodwa ukusetyenziswa ukucinezela igesi kwindawo enemitha yesikhululo samandla senyukliya kunye negesi eyityhefu kakhulu;
Ngenxa yokungabikho kwezinto zokuthambisa kumngxunya uvalo, oko kukuthi, akunakwenzeka ukuba irhasi inxibelelane nayo nayiphi na into yokuthambisa, akukho ngxaki yokucinezela uxinzelelo oluphezulu lwegesi kunye neoksijini, irhasi kunye nechlorine, njl.
◎ Xa kuthelekiswa nezicinezeli zezinye iindidi, irhasi ayizukungcola ngamasuntswana avelisiweyo ngenxa yokukrala kwamalungu atyibilikayo, ke ngoko, kuqinisekiswe ukuba ubucoceko obufanayo begesi xa bufakwa kwisiguquli. Ke ngoko, ilungele ukucoceka okuphezulu njengegesi ye-elektroniki, igesi yokuphefumla kunye ne-hydrogen esetyenziselwa itekhnoloji yeseli yamafutha;
Iqondo lokucinezelwa eliphezulu. Ngenxa yoyilo olwenziweyo lwe-diaphragm cavity curve, ubuninzi be-deaphragm phantsi koxinzelelo oluvumelekileyo kuyaqinisekiswa ukuba kufunyanwe ukusebenza kwevolumu ephezulu;
Lub Uxinzelelo ukuthambisa ajikeleze lwamkelwe isiguquli, ke iindawo ezihambayo ze-compressor zine-lubrication efanelekileyo yeoyile ye-hydraulic, enciphisa ukubola kweendawo ezihambayo kunye nokunciphisa izinga lokugcina;
Uxinzelelo lweoyile yokunyanzelwa kwamkelwa i-compressor, eyile, i-lubricant, emva kokucoca irhabaxa, icinezelwe ngokudlula kwimpompo yegiya yokucoca kakuhle, emva koko faka impompo yokuhambisa, olu hlobo lweoyile yokucinezela inokuthintela ukwenzeka kokungathambisi ioyile ngenxa umoya okhoyo kwimpompo yokushenxisa; kwangaxeshanye inokuthintela amasuntswana amancinci ukuba angene kwimpompo yokutsala ukuba yonakalise i-plunger, oko ke kuyolula ubomi benkonzo yempompo yokutyibilika.
Device Isixhobo sokuvusa i-alphaham kunye ne-alamu yoxinzelelo olusezantsi lweoyile yokuthambisa yokuqinisekisa ukhuseleko kunye nokuthembeka kokusebenza kwecompressor;
◎ Iibholiti, amandongomane kunye namalungu entloko yesilinda ayanyangwa wonke umphezulu; kunye neepayipi zeoyile kunye neicooler zonke zamkela umbhobho wentsimbi engenazingcingo, ukubonelela ngenkangeleko yomatshini uphela;
Valve Ivalve yoxinzelelo lweoyile yamkelwe kwinkqubo yokubonisa, ngokubonelela ngokusebenza ngokulula;
ICompressor ineemeko ezintle zokupholisa. Ioyile epholileyo ifakwe kwitanki yeoyile yecompressor kunye nebhatyi yamanzi ibekelwe umzimba ophakathi, umzimba wesilinda kunye nentloko yesilinda, enikezela ukupholisa okuhle kwioyile kunye negesi, oko kuphucula ukusebenza komatshini wecompressor;
Ukwamkelwa koyilo lweemodyuli. Ngokwemfuno yomsebenzisi, i-crankcase ye-serial kunye nentloko yediyaphragm zikhethwe ukubonelela ngoxinzelelo olubanzi kunye nokuhamba;
Inqanaba eliphantsi lengxolo;
Izixhobo zokungcebeleka kunye nenkonzo yasemva kokuthengisa inikezelwa ngexesha lobomi benkonzo yonke yemveliso.
Uhlobo olwenziwe ngokwezifiso ngokusekwe kwisicelo esineenkcukacha.
Isiguquli siya kusiwa kunye nebhokisi yomthi yokukhusela.
Uqinisekisa njani uhlobo lwecompressor?
Kufuneka siyazi igesi, inqanaba lokuhamba, uxinzelelo lwe-inlet kunye noxinzelelo lwe-outlet.
Njani malunga abaza kuzisebenzisa?
Sibonelela ngeseti enye yamalungu kunye necompressor.
Isiguquli seDiaphragm seHydrogen Energy